Imoto Carpet Factory, Abahlinzeki - China Carpet Carpet Manufacturers
I-Non-Slip PVC Wire Ring Mat Car Car Car Interiors yangokwezifiso
Omata bezimoto zikasilika bakaBensen balungele imvelo futhi abanakho ukungcola, ngokuyisisekelo abanazo izinto eziyingozi kubantu, futhi badlulise izivivinyo zekhwalithi.
Ukuqina Kwe-PVC Coil Ukungena Kwezimoto Mat Carpet
Uma kuqhathaniswa namata wesikhumba wendabuko, amacansi endwangu, amacansi esilika angasikwa futhi abunjwe ngumnikazi, futhi kube lula ukuwahlanza, akulula ukwenza imoto ikhiqize iphunga elikhuntile.
Ukuphakelwa Kwamafektri Okuqondile Kwe-China PVC Car Car Floor
Omata bakasilika bekhoyili banganciphisa ukukhathala konyawo futhi bakhuphule injabulo yokushayela. Omata bonyawo kasilika banobunono, amandla athwala isisindo, futhi akukho ukugogeka lapho kufinywa.
Intengo Yokuthengisa Eshisayo Yokuncintisana Kwe-PVC Carpet Yezimoto
Njengoba uhlobo unyawo mat impahla, the usilika indandatho unyawo mat has izinzuzo zayo eziyingqayizivele, ezifana nokuqinisekisa induduzo ngenkathi kwenziwa yokuhlanza lula nokunakekelwa okulula.
Eshibhile Floor PVC Ikhoyili Car Floor Carpet Roll Car Carpet Mats
Ukusetshenziswa kwezinto zemvelo nezemvelo ukukhiqiza amacansi ezinyawo, anezici ezikhululekile nezinhle. Imininingwane engaphezulu, sicela uxhumane nathi.
Ikhwalithi Ephakeme Yekhoyili Yemoto Phansi Mat Roll PVC Foot Mat Carpet
Impahla eluhlaza ka-coil car floor's yi-PVC, ethambe ngokwengeziwe futhi ethokomele uma iqhathaniswa namanye amacansi ezinyawo, futhi iyimata yonyawo lwemoto yezinhloso ezine ezijwayelekile.
Izesekeli Zemoto ezenziwe ngokwezifiso Ifektri Car Car Floor Roll
I-PVC ikhoyili yemoto yokugqoka engagudluki, elula ukuyihlanza nokunakekela okuhle, inganqunywa ngokuthanda ezindaweni ezahlukahlukene. Sicela uxhumane nathi ngokushesha ukuthola eminye imininingwane.
Isesekeli Semoto Yonke Ikhaphethi Yesimo Sezulu se-PVC ngombala oMsulwa
Omata bezimoto zikasilika banamandla aqinile okufihla ukungcola futhi bangagcina imoto ihlanzekile isikhathi eside.
I-PVC Floor Car Foot Mat engenamanzi ye-Auto Interiors
Omata bonya bezindingilizi bakasilika banomsebenzi wemvelo wokulwa nokungcola nokungangenwa ngamanzi, isakhiwo esiyingqayizivele sesiyingi sesilikhi singakhiya umswakama webala awuvuzi, gcina imoto ihlanzekile futhi iqoqekile ngaso sonke isikhathi, kulula ukuyihlanza, i-flush ehlanzekile.
I-Eco-friendly PVC Coil Loop Car Foot Mat Auto Carpet yeVechicle Interiors
Ukwakheka kwamasondo endandatho kasilika kulula ukuwanakekela, kulula ukuwahlanza, kungavimbela ukukhula kwamagciwane, kunokuvikela okuhle nomthelela wokulwa namagciwane, ukuvikela okuphelele kwenhlanzeko yangaphakathi yemoto.
I-Anti Slip PVC Double Colour Car Floor Foot Mat
Omata bonsimbi bendandatho yonyawo abayona intamo ngaphansi kwezinga lokushisa eliphansi futhi abancibiliki ngaphansi kokushisa okuphezulu. Inokumelana kahle kwesimo sezulu, unyaka wonke, noma ngabe kuyabanda, ukushisa akukwenzi ukusonteka kungapheli, ikhwalithi ethembekile nomjikelezo wokusebenzisa isikhathi eside.
Luhlala Isikhathi Eside I-PVC Water Coil Car Mat in Roll nge-Anti-slip Back
Umbuthano kasilika kaBenson wenziwe ngemvelo nangobungani bemvelo ephezulu ye-PVC resin compound, ngokusebenzisa ukuncibilika okushisa okuphezulu nokukhishwa, kubunjwe emgqeni kasilika onamathiselwe ukusekelwa kwe-PVC, ngemuva kwezinqubo eziningi ezinhle. Umkhiqizo awufakanga i-wax kapharafini ene-oxidized, eyingozi empilweni, futhi inempilo futhi ayinaphunga. Izingcezu nemikhiqizo elahliwe iyi-resin ye-thermoplastic evuselelekayo.